Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Scion – ကားဝယ်သူများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Scion – ကားဝယ်သူများအတွက်
Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Scion – ကားဝယ်သူများအတွက်
Posted by kai on Oct 26, 2010 in Know-How, DIY, News, U.S. News |0comments
Acura Honda Hyundai Infiniti Scion
While Honda and Toyota still dominate in reliability, General Motors has improved considerably in our latest predicted-reliability Ratings. Those are the findings of our 2010 Annual Auto Survey, based on subscribers’ experiences with 1.3 million vehicles.
အေရှကားတွေ ရှေ့ကပြေးနေဆဲ၊ ကောင်းနေဆဲပါတဲ့။ ကားဝယ်ဖို့ကြံနေသူတွေအတွက် ဆာဗေးပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဂျာမန်ကားတွေက ဒီနှစ်ကံမကောင်းပါတဲ့။
ဂျပန်ကားတွေဟာ ပြန်ရောင်းရလွယ်တယ်။ ဆီစားသက်သာတယ်..။ ပြီးတော့ စိတ်လည်းချလာရပါတယ်တဲ့.။
ကိုရီးယားက စီးပွားတက်လာတာမို့ ကပ်ပါလာပြီပေါ့။